WHO oo ka digtay in 200,000 ay coronavirus ugu dhiman karaan gudaha Afrika - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeAfricaWHO oo ka digtay in 200,000 ay coronavirus ugu dhiman karaan gudaha Afrika
May 9, 2020 Puntland Mirror Africa, World 0
Qof la fiiranayo heerka xumadiisa meel kamid ah Afrika. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa ku dili kara 190,000 qaarada Afrika labo iyo tobanka bilood ee soo socda, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay Haayada Caafimaadka Adduunka ee WHO.
Daraasada WHO ayaa sheegaysa in qiyaastii dad gaaraya 44 milyan uu ku dhici karo xanuunka ayna u dhiman karaan 83,000 ilaa 190,000 qof oo Afrikan ah haddii aan la xakamayn cudurka.
Faafista coronavirus ee Afrika ayaa u muuqata in ay yaraan doonto sababtoo ah dadka qaarada oo u badan dhalinyaro iyo dabeecadaha deegaanka, WHO ayaa sidaas sheegtay.
Nafaqada darada aadka u sareysa iyo saboolnimada, nidaamka caafimaadka ee liita, tirada badan oo HIV iyo sahayda cunada ee yar ayaa mar dhow noqon kara musiibo.
Inta badan hoggaamiyeyaasha Afrikaanka ayaa si dhaqso ah u aqoonsaday khatarta ka imaanaysa Covid-19, waxayna xireen xuduudahooda ayna joojiyeen safarada hawada caalamiga ah iyadoo jiraan kiisas yar oo dalalkooda ah.
Tani waxay hoos u dhigtay faafitaanka fayraska laakiin hadda kiisaska coronavirus ee la diiwaangeliyay ayaa bilaabay inay si tartiib ah kor ugu kacaan dal kasta oo Afrikaan ah.
Marka la eego tirakoobka ay sii deysay WHO Arbacadii, waxaa jira ku dhawaad 33,000 kiis oo la xaqiijiyey oo ah Covid-19 iyo 1,193 dhimasho ah gudaha Afrika.
Puntland will prevent cash money from central Somalia, governor says
Garowe-(Puntland Mirror) Security forces in Puntland will prevent cash money suspected to come from the central of Somalia, an official said. Speaking to reporters in Garowe, Nugal governor, Omar Abdullahi Mohamed said the forces are [...]
Hoggaamiyaha Khaatumo oo tagay magaalada Burco
Garoowe-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaha maamulka Khaatumo ayaa tagay magaalada Burco ee Somaliland, waqooyiga Soomaaliya, sida ay xaqiijiyeen ilo-wareedyo. Cali Khaliif Galayr iyo xubno katirsan maamulkiisa ayaa gaaray magaalada Burco habeenimadii Axada, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen. Safarka [...]